संक्रमितको घुमफिरले झापाको गाउँ नै सिलबन्दी – Health Post Nepal
२०७७ वैशाख १८ गते १५:१४
झापाको बाह्रदशी गाउँपालिकामा कोरोना संक्रमित व्यक्ति वैशाख १४ गते बिहानसम्म खुलेआम हिँडिरहेका थिए। उनी घर-घरै पुगेर राहत वितरण कार्यमा पनि सक्रिय थिए।
तर, गत आइतबार उनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि अहिले झापाको बाह्रदशी गाउँपालिका सिलबन्दी गरिएको छ। बेपर्वाह सामाजिक र नियमित कार्यमा संलग्न भएका ती संक्रमितका कारण गाउँ सिलबन्दी गर्नुपरेको हो।
खुला रूपमा भएका उनका गतिविधिका कारण संक्रमितको घरको अवस्थिति र आसपासमा झुरुप्प घर भएका कारण पनि संक्रमण अरूलाई सरेको हुन सक्ने भयले छिमेकी र आसपासका गाउँका नागरिक सन्त्रासमा परेका छन्।
बाह्रदशीका विभिन्न भाग सिल गरिएको बिहीबार चार दिन भएको छ। झापामा कोरोना संक्रमित दोस्रो व्यक्ति भेटिएपछि बाह्रदशीको केही भू–भागलाई सिल गरिएको छ।
अन्यत्र संक्रमण फैलिन नदिन उक्त भू–भागलाई निषेधित एरिया तोकिएको छ। स्थानीयबासी अहिले पनि त्रासमा नै छन्। बाह्रदशी–४ का एक पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि स्थानीयमा त्रास बढ्नु स्वाभाविक हो।
भौतिक दूरी समेत कायम नगरी उनी गाउँघर हिँडेकाले पनि स्थानीयमा त्रास कायमै रहेको चकचकीका स्थानीय कृष्णराज कटुवालले बताए। ‘भूगोल सिल गरेर नहुँदो रहेछ, त्रासलाई सिल गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने।
पशुपति माविका शिक्षक गुणनिधि लुइँटेलका अनुसार परीक्षणका लागि पठाइएको स्याम्पलको रिपोर्ट नआउन्जेल त्रास नहट्ने बताए।
‘कसैको रिपोर्ट पोजेटिभ आयो भने स्थितिको आँकलन अहिले नै गर्नु हतारो हुन्छ, संक्रमित व्यक्तिलाई जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको टोली र सुरक्षा निकायले घरमै पुगेर होम क्वारेन्टाइनमा बस्न भनेका थिए, उनले निर्देशन पालना नगरेकाले पनि त्रास बढ्नु स्वाभाविक हो,’ उनले भने।
को हुन् संक्रमित?
कोरोना संक्रमित मुस्लिम धर्मगुरु हुन्। स्थानीय दारुम उलुम मदरसाका प्रधानाध्यापकसमेत रहेका उनी राहत वितरणमा खटिएका थिए।
उनी फागुन २० देखि २८ गतेसम्म भारतको नयाँ दिल्लीस्थित निजामुद्दिनमा मुस्लिम संस्था तबलिकी जमातको हेडक्वार्टरमा भएको धार्मिकसभामा सहभागी भएर घर फर्किएका थिए। घर फर्किएको ४५ दिनपछि उनमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको हो।
४९ वर्षीय ती युवा दिल्ली जानुअघि सप्तरीको बोदेबरसाइन नगरपालिका-५ मा फागुन ३, ४ र ५ गतेसम्म अल्मी इज्तिमाको आयोजनामा चलेको मुस्लिम समुदायको सम्मेलनमा सहभागी भएका थिए।
विराटनगरको कोसी अञ्चल अस्पतालमा गरिएको पिसिआर परीक्षणमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको थियो। कोरोना संक्रमितबाट थप व्यक्तिहरूमा सरेको हुन सक्ने भएकाले त्रास भएको स्थानीय बिपी लामिछानेले बताए।
संक्रमण फैलन सक्ने क्षेत्र गाउँपालिकाको पूर्वमा साबिक चकचकी गाविसको सिमाना कञ्चनमार्ग, पश्चिममा बिरिङ खोला, उत्तरमा साबिक चकचकीको सिमाना पाख्रिबास होटल र दक्षिणमा राधानगर र घाग्रा खोलासम्मको चार किल्ला भू–भाग सिल गरिएकाे छ।
६३ जनाको स्याम्पल पठाइयो
संक्रमितसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएका पहिलो घेराका व्यक्तिहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको आधार बनाएर स्याम्पल संकलन गरी परीक्षणमा पठाइएको गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ।
स्वास्थ्यकर्मी, जनस्वास्थ्यकर्मी र प्रयोगशालाकर्मीहरूको तीन वटा छुट्टाछुटै टोली संक्रमण क्षेत्रमा परिचालन गरिएको थियो। प्रत्येक टोलीले घर–घर पुगेर स्याम्पल लिएको थियो।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय झापाका फोकल पर्सन जीवन चौलागाईंका अनुसार संकलित स्याम्पल मंगलबार कोसी अञ्चल अस्पतालमा निर्माण गरिएको कोरोना अस्पतालमा पठाइएको छ।
कुन–कुन क्षेत्र सिल गरियो?
सिल गरिएको क्षेत्रले बाह्रदशीको तीन वटा वडा छोएको छ। वडा नम्बर ४ को सबै भू–भाग तथा छिमेकी वडा नम्बर ३ र ५ को सामान्य भू–भाग सिल गरिएको छ।
निषेधित क्षेत्रको समन्वयका लागि ९ सदस्यीय समिति समेत गठन गरिएको। समितिमा गाउँपालिका अध्यक्ष खड्गप्रसाद राजवंशी, उपाध्यक्ष रत्नाकुमारी राजवंशी, वडा नम्वर ३, ४ र ५ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका पदाधिकारी सदस्य रहेका छन्।
दिल्लीबाट फर्केपछि भेटघाट बढाए
दिल्लीबाट फर्केर उनले धेरैसँग भेटघाट गरेको देखिन्छ। स्थानीय मदरसामा पढाउने गरेका उनी विद्यार्थीहरूको सम्पर्कमा पनि पुगे। संक्रमितको परिवारमा श्रीमती र दुई छोराछोरी छन्।
उनको परिवारसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा १५ जना रहेको स्थानीयले बताए। अरु ४५ जना र संक्रमितको परिवारले प्रयोग गर्ने आँगन एउटै हो।
४९ वर्षका ती संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय झापाले बताएको छ। फोकल पर्सन चौलागाईंले उनको स्वास्थ्यमा कुनै समस्या नरहेको बताएका छन्।